28-ka September ayuu madaxweynaha u qabsaday inuu kusoo magacaabayo Ra'isulwasaare [Warbixin]
28-ka September ayuu madaxweynaha u qabsaday inuu kusoo magacaabayo Ra’isulwasaare [Warbixin]
Updated About:237 days ago 0
Wararka aanu ka heleyno madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu u qabtay waqtiga kama danbeysta ah ee uu Ra’isulwasaaraha kusoo magacaabayo labada maalin ee soo aadan gudahood.
Waxaa saacadihi lasoo dhaafay uu Xasan Sheekh Maxamuud dar dar geliyey wada hadalada uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta, isaga oo go,aan ku gaaray in sadex nin midkood uu xilkaasi u magacaabo.
Sadexda nin oo kasoo wada jeedo beesha Mareexaan ayaa kala ah Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Maxamed Barre iyo xaaska xildhibaanad Casha Xaaji Cilmi oo ah siyaasi galaagal badan.
Dhanka kalana waxaa olole balaaran wado madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole oo kaashanaya ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga kaasi kuwaas oo geed dheer iyo ganbar gaaban u fuulayo sidi Ra’isulwasaaraha looga dhigi lahaa nin kasoo jeedo Puntland ama beesha Majeerteen.
Cadaadis xoogan ayaa waxaa uu madaxweynaha kaga imaanaya qeybaha kala duwan ee siyaasada iyo mudanayaasha baarlamaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka oo ah inuu si dhaqso ah usoo magacaabo Ra’isulwasaaraha.
Magaalada Muqdisho ayaa hada ku jirto xaalad kala guur ah dad badanna waxay aaminsanyihiin in marnaanshaha Golaha Wasiirada iyo Ra’isulwasaaraha ay sabab u yihiin qaska iyo qalaanqalka ka jira caasimada.